China Amakhaladi Ama-Acrylic AmaSpredishithi Nama-Plexiglass Anemibala ifektri kanye nabaphakeli Isi-Donghua
CAcrylic enemibala Sama-heets & Umbala we-Plexiglass, ama-Acrylic Plastic Sheets
Amashidi e-acrylic anemibala (i-plexiglass) alula, aqinile, ayamelana nomthelela, futhi anikezela ngezimfanelo eziningi zobuhle. Leziamashidi we-acrylic kulula ukuzenza, kunganamathiselwa, kusikwe i-laser, kuboshwe, kuqoshwe, kupholishwe, kufudunyezwe futhi kugotshwe ngama-engeli ahlukene, kusenza sikwazi ukwenza noma yimuphi usayizi nanoma imuphi umbala ezintweni ezikhangayo.
UDhua unikeza uhlu olubanzi lwamashidi we-Acrylic Colors Plexiglass Acrylic. Imibala ejwayelekile enombala ifaka phakathi obomvu, owolintshi, ophuzi, oluhlaza okotshani, onsundu, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, onsomi, omnyama, omhlophe kanye nemibala ehlukahlukene. Zonke zingasikwa zisayizi futhi zikulungele ukusika kwe-laser, okwenza ukwenziwa kwezimpawu, ukukhonjiswa kokuthengwa, nemiklamo yokukhanyisa ibe lula futhi isebenze kahle.
Igama lomkhiqizo Ishidi le-acrylic elinemibala- “PMMA, Lucite, Acrylite, Perspex, Acrylic, Plexiglas, Optix”
Igama Elide Polymethyl Methacrylate
Izinto I-100% ye-Virgin PMMA
Usayizi 1220 * 1830mm / 1220x2440mm (48 * 72 ku / 48 * 96 in)
Ubuningi 1.2g / cm3
Umbala Olubomvu, owolintshi, ophuzi, oluhlaza, onsundu, oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama okwesibhakabhaka, onsomi, omnyama, u-ect omhlophe Umbala wangokwezifiso uyatholakala
Ubuchwepheshe Inqubo yokukhiqiza eyandisiwe
MOQ Amashidi angama-300
Ukulethwa Isikhathi Izinsuku 10-15 emva oda isiqinisekiso
Ishidi le-DHUA le-Acrylic Liyenziwe Kalula
Ishidi lethu le-acrylic elinemisebenzi ehlukahlukene lingasikwa kalula, lisuswe, liboshwe, lipholishiwe, ligoqwe, lenziwe ngomshini, lenziwe i-thermoformed futhi liqiniswe
DHUA Hnjengoba CUmbala Ai-crylic Sama-heets Aukutholakala phakathi Custom Sizes futhi Hues
Imikhiqizo ye-acrylic yeshidi enemibala eyenziwe ngokwezifiso yenziwe ngokwenziwe, izinto zokuhlobisa zepulasitiki futhi zitholakala ngemibala eminingi.
Ukubekezelelana okujwayelekile okusika osayizi nobubanzi kungu +/- 1/8 ″, kepha kuvamise ukunemba kakhulu. Sicela uxhumane nathi uma udinga ukucacisa okukhulu. Ukubekezelelana kokuqina kweshidi le-Acrylic kukhona +/- 10% futhi kungahluka kulo lonke ishidi, kepha ukuhluka kuvame ukuba ngaphansi kuka-5%. Sicela ubheke osayizi beshidi bokuzisholo nabangempela ngezansi.
3/16 = 4.5mm = 0.177 77
I-Translucent, esobala noma i-Opaque Coloured Acrylic Plexiglass Kuyatholakala
Sinikeza amashidi e-plexiglass acrylic anemibala ebangeni elibanzi lemibala esobala, eguquguqukayo, kanye ne-opaque.
· I-Acrylic Plexiglass engabonakali = Izithombe zingabonwa ngoshidi (njengengilazi enombala)
· I-Translucent Acrylic Plexiglass = Ukukhanya nezithunzi kungabonakala ngeSpredishithi.
· I-Opaque Acrylic Plexiglass = Ukukhanya noma izithombe azibonwa eshidini.
Ishidi le-acrylic eliguquguqukayo futhi elenhloso yonke elinezinto eziningi ezisebenzayo, ishidi le-acrylic elikhishiwe inezinhlobonhlobo zezicelo ezindaweni eziningi, ezentengiso, ezezimboni nezokusetshenziswa ngobungcweti.
Ukuqweqwedisa, onogada nezihlangu, izimpawu, ukukhanyisa, ifreyimu yesikhombi sesikhanyisi, iphaneli yomhlahlandlela wokukhanya, izimpawu, ukubonisa okuthengiswayo, ukukhangisa kanye nendawo yokuthenga nokuboniswa kokuthengisa, amadokodo ombukiso wezokuhweba namacala wokubonisa, imingcele yekhabethe nezinhlobonhlobo zamanye amaphrojekthi asekhaya we-DIY. Uhlu olulandelayo luyisampula nje.
Izimpawu, amabhodi wesethulo
Ingadi yobuciko nokuhlobisa kwasekhaya
Amapaneli wobumfihlo wokuhlukanisa
Izembozo zephaneli elikhanyayo
Amashalofu abuyiselwe emuva, amashalofu okuhlobisa
Ishidi le-acrylic elandisiwe likhiqizwa ngenqubo yokukhipha. Ama-acrylic resin pellets afudunyezwa kusisindo esincibilikisiwe esiqhutshwa ngokuqhubekayo ngosofa, isikhundla esinquma ubukhulu beshidi elikhiqiziwe. Uma usudlule kufini, isisindo esincibilikisiwe sishiya ukushisa futhi singasikwa bese sisikwa osayizi bamashidi abadingekayo.
amashidi ombala we-acrylic
umbala weshidi le-acrylic
izintengo zeshidi le-acrylic
ishidi le-acrylic elimnyama
umbala acrylic ishidi
ishidi le-acrylic plexiglass elinemibala
ishidi le-acrylic elinemibala
ishidi le-acrylic elikhishiwe
ishidi elimhlophe le-acrylic